Mpempe akwụkwọ na-ekpochapụ nke Whiteboard
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:mbadamba na-ebugharị,mbadamba na-ewepu,mwepụ na-ewepu,,,
Home > Ngwaahịa > Igwe eji magnetik anabata ihe > Adhesive Removing Whiteboard
Ngwaahịa nke Adhesive Removing Whiteboard , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, mbadamba na-ebugharị , mbadamba na-ewepu suppliers / factory, wholesale high-quality products of mwepụ na-ewepu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Mpempe akwụkwọ ndọtị Reusable Ihe Nke MRWT-NS50-FXCK Mwepu Mgbakwunye Whiteboard bụ onwe ịgbado ọkụ na-acha ọcha , mfe mkpụmkpụ, gbagọrọ agbagọ, kpachara anya, ma ọ bụ nwee ike ịbanye n'ime ụdị ọ bụla dabere na ihe ndị ahịa chọrọ. Mgbakwunye pụrụ iche gbakwunyere na - ewepu maka ịgagharị agagharị na White Adhesive...
Ehichapụ ihe na-ekpo ọkụ Whiteboard Akwụkwọahụaja Nkebi nke GRWT-NS50-FXCK Mbadamba ihe nkwụnye akwa Whiteboard bụ ụdị nke na -acha ọkụ na-agbanwe nrapado , mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, kpụkọta, ma ọ bụ nwere ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Mgbakwunye pụrụ iche gbakwụnyere mgbapụ...
China Adhesive Removing Whiteboard Ngwa
Mbughari nrapado Whiteboard bụ bụ ụdị obere whiteboard na re ibughari nyagide. Mgbakwunye pụrụ iche gbakwụnyere iwepụ maka nbanye na-aga n'ihu na-etinye aka na blanket . Ọ bụghị naanị na ọ gaghị ada ngwa ngwa, ma ọ ga-anọgide na-arahụ mgbe ọ gachara ma ọ bụrụ na nhicha ahụ dị ncha.
mbadamba na-ebugharị mbadamba na-ewepu mwepụ na-ewepu